निषेधाज्ञामा नागरिकले कुरा नबुझ्दा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी यसरी दु’खेसो पोख्छन् ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
May 4, 2021 AdminLeaveaComment on निषेधाज्ञामा नागरिकले कुरा नबुझ्दा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी यसरी दु’खेसो पोख्छन् ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
यस अघि नै मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुई साता निषेधाज्ञा गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्न प्रहरीहरु टोल टोल देखि सडकमा तैनाथ रहेका छन । ड्युटीमा खटिएका प्रहरीहरुले आफ्नो पिडा मिडिया सामु पोखेका छन ।
बालकुमारीमा खटिएका प्रहरी सइ बि. सिलवालले सर्बसाधारणले कुरा नबुझ्दा दिक्क लागेको दुखेसो पोख्छन । नागरिक आफै सजक हुनुपर्नेमा प्रहरीले सम्झाउदा पनि अटेर गरेको बताउछन । भिडियो हेर्नुहोस: